बिदेशी खेलाडीको नेपालमा हरिबिजोक, बरु नेपालमै मार्छौ भन्दै रुदै मागे नेपालीसंग सहयोग (भिडियो) – Nepal Insider
अबका दिनमा उपचार नपाएर कोही नेपालीले मर्नु पर्ने छैनः सासंद थापा
चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम “सिधा कुरा जनतासँग” बन्द हुँदै, रवि लामिछाने राजनितिमा प्रवेश?
चितवनमा फेरी अर्को अष्ट्रेलिया काण्ड: बिहे गरि अष्ट्रेलिया लैजान्छु भनि प्रेमिकाले फसाईन, पच्चीस लाख चैट (भिडियो हेर्नुस्)
रेखा थापाले यी समाजसेवी केटासँग लगनगाठोँ कस्दैँछिन् ?
खुसीको खबर : घटेपछि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य सूची हेर्नुहोस्‘
यी हुन् नेपाली चेलीहरु जो बिदेशका ठुला बोइङ मा एयर होस्टेज छन् !
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बिदेशी खेलाडीको नेपालमा हरिबिजोक, बरु नेपालमै मार्छौ भन्दै रुदै मागे नेपालीसंग सहयोग (भिडियो)
काठमाडौं – लामो समय नेपालमा फुटवल खेल्न आएका विदेशीहरुको अहिले हरिविजोग भएको छ । विश्व व्यापी फैलिएको कोरोनाको कारण उनीहरुको अवस्था निकै नाजुक भएको छ । केही सामाजिक अभियन्ताहरुले सामान्य सहयोग गरेपनि उनीहरुको जिवन सहज भएको छैन । कोठा भाडा तिर्न देखि दिनहुँको छाक टार्न नै समस्या भएपछि उनीहरुले सहयोगको अपिल गरेका छन् ।
नेपालमा स्टार खेलाडीकै रुपमा नाम कमाएकाहरुको नै यस्तो विजोग अवस्था देखेपछि खेलमा भविष्य खोज्नेहरुको लागि त्यसले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै सहयोगको अपिल गरेका छन् । चार वर्ष देखि नेपालमा फूटवल खेलमा सहभागी भएका उनीहरु अहिले नेपाली निकै राम्रो बोल्ने भएका छन् । उनीहरुलाई नेपालकै माया लाग्छ । तर दिनहुँको समस्याले भने पिरलेको छ । त्यसैले उनीहरु आफ्नो घर फर्कन चाहन्छन् तर त्यसका लागि पैसा नभएका कारण उनीहरु अलपत्र परेका छन् ।
कोरोना जोखिमका कारण न खेल छ न घर जाने पैसा छ उनीहरु विदेशी मुलुकमा अलपत्र पर्नुपर्दा आफ्नो दुख सुनाउँछन । नेपालमा आएर खेलेका विदेशी खेलाडी सबैको उस्तै समस्या भएको भन्दै उनीहरुले सबैलाई सहयोगको अपिल गरेका छन् । फूटवल खेल्न नपाएको ८ महिना भइसकेको छ, क्लबमा कुनै गतिविधि भएको छैन एक खेलाडीले भने, दुई छाक खान र कोठा भाडा तिर्ने पैसा नहुँदा घर जान पनि पाएका छैनौं । यस्तो अवस्थामा परिवारको साथ भएपनि अलि सहज हुन्थ्यो तर हामी घर देखि निकै टाढा छौं उनले आफ्नो समस्या सुनाए । भिडियो :
अष्ट्रेलिया जाँदा प्लेनमा शिशिर भण्डारीलाई के भयो/ कोरोना भाईरसले यस्तो गर्यो..हेर्नुस (भिडियो)
47 seconds अघि